Lego ခြောက်ခု Ideas ဆောင်ပုဒ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသော minifigures များ
LEGO Cyber ​​Monday သည် ၂၀၂၁ တွင်သဘောတူညီသည်
12 / 08 / 2021 12 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 398 Views စာ0မှတ်ချက် 21103 အဆိုပါ DeLorean အချိန်စက်, 21109 Exo ဝတ်စုံကို, 21304 ဆရာဝန်အဘယ်သူသည်, 21315 Pop Up စာအုပ်, 21315 Pop-Up စာအုပ်, 21317 Steamboat ဝီလီ, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 21324 123 နှမ်းလမ်း, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, 76051 စူပါသူရဲကောင်းလေဆိပ်တိုက်ပွဲ, ပြန်အနာဂတ်အား, ဗိုလ်ကြီး Redbeard, DeLorean, ရှုထောင့်, Disney, Elmo, ပန်ကာ, ပန်ကာဒီဇိုင်း, ပန်ကာဒီဇိုင်း, ဘီလူး, Manရာလူသား, iantရာမလူသား, Ideas, Lego, Lego အရွယ်အစား, Lego Disney, Lego Ideas, Lego Minifigures, Marty McFly, ကို Mickey, မစ်ကီမောက်စ်, အသေးစား, သေးသေးလေး, အနားယူသည်, Lego အနားယူသည်, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, နှမ်းလမ်း, Steamboat ဝီလီ, Winnie ဟာ Pooh
Lego Ideas ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောအုတ်အခြေခံကက်တလောက်တွင်ထူးခြားသောအစုံအချို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၎င်းသည်အပြင်အဆင်ကိုပုံဖော်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသောသေးငယ်သည့်ရုပ်သေးရုပ်များနှင့်အတူရှိသည်။
ပြန်လာမှ Lego ပရိတ်သတ်များမှုတ်သွင်းထားသောဆောင်ပုဒ်၏အပြင်ဘက်တွင်မပေါ်သေးသောလိုင်စင်ရဇာတ်ကောင်များအတွက် icon များ Lego Ideas အက္ခရာအကြီးနှင့်အငယ်ပါ ၀ င်သည်။
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတွင်နောက်ထပ်ပရောဂျက်များစွာ (အပါအ ၀ င်) အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း, Sonic Mania ကို သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်တွေ) လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကအကောင်းဆုံး minifigures ခြောက်ခုကိုပြန်ကြည့်ရအောင် Lego Ideas.
ပထမဆုံးလိုင်စင်ရ minifigure အဖြစ် Lego Ideas (သို့မဟုတ် CUUSOO ကို ၂၀၁၃ တွင်နာမည်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်း) M.arty McFly နှင့် Doc Brown ၏ပလပ်စတစ်ဗားရှင်းများကိုသရုပ်ဖော်သည် classic Back to the Future franchise မှတွဲဖက်ပစ္စည်းများနှင့်အချိန်ခရီးသွား Delorean တို့ပါ ၀ င်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အသစ်နှင့် ဦး ခေါင်းပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဤဇာတ်ကောင်များကိုနောက်ဆုံးတွင် p အဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်art of Lego အတိုင်းအတာများ၊ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းဤအဟောင်းတစ်စုံ Lego Ideas minifigures များသည်လိုင်စင်ရ minifigures ၏ရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်မည့်လမ်းအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။
Pete နှင့် Yve
Pete နှင့် Yve တို့သည်တစ်တွဲဖြစ်သည် classic Lego အစိမ်းရောင်ယူနီဖောင်းအသစ်နဲ့ပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့တဲ့အာကာသယာဉ်မှူး part 21109 Exo-suit ၏ ဒါတွေပါ Lego Ideas minifigures များသည် set ၏မူလဒီဇိုင်နာကိုကိုးကားရန် theme ၏ပထမဆုံးအတွဲဖြစ်လိမ့်မည်။
တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, အ Lego Ideas အဖွဲ့သည်ကန ဦး စီမံကိန်းတင်ပြချက်များနှင့်တင်ပြသူများအတွက် Easter ကြက်ဥများကိုထည့်ရန်မထူးဆန်းပါart တရားဝင်နှင့်နောက်ဆုံးပုံစံ minifigure အတွဲသည်ပန်ကာဒီဇိုင်နာ Peter Reid နှင့်သူ၏အချိန်စေ့စပ်ထားသော Yvonne Doyle တို့၏တိုက်ရိုက်အပန်းဖြေမှုများဖြစ်သောကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တည်ဆောက်မှုကိုကူညီတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သေးငယ်သောပုံသဏ္ဌာန်အနည်းငယ်သည်စကေးမှဧရာမနည်းအတိုင်းချဉ်းကပ်လာသည် 21315 Pop-Up စာအုပ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Jack နှင့် Beanstalk တို့မှတိမ်တိုက်များကိုသရုပ်ဖော်ထားသောဇာတ်လမ်းနှစ်ခုတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
ဤသေးငယ်သောပုံသဏ္ဌာန်သည်ကြီးမားသောဇာတ်ကောင်ကဲ့သို့သူ့ကိုယ်သူမဖော်ပြပေ Marvel76051 စူပါဟီးရိုးလေဆိပ်တိုက်ပွဲတွင်ဧရာမလူသားသည်၎င်း၏သေးငယ်သည့်စည်များနှင့်အိတ်ကပ်အတွင်း၌ငန်းကဲ့သို့သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်များကိုထည့်သွင်းရန်၎င်းကိုရွေးချယ်သည်။ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောရှုခင်းပေါ်တွင်မတ်တပ်ရပ်ရန် microfigure နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်အခြားမမြင်နိုင်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဧရာမပုံသေးသေးလေးတစ်ခုပြုလုပ်စေသည်။ Lego အစုံ။
မိတ်ဆက် 21317 Steamboat ဝီလီ ဒုတိယစီးရီး၏ black and white minifigure ၏အသုံးများသော version မတိုင်မီလအနည်းငယ်အလိုတွင်ဖြန့်ချိသည် Disney စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures များ၊ Mickey Mouse သည်ဆောင်ပုဒ်တွင်အဆန်းနှင့်အရောင်မပါသည့်အသွင်အပြင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူ၏ p ဖြင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်artner, Minnie Mouse, monochromatic duo သည်သီးသန့်တည်ရှိသည် 21317 Steamboat ဝီလီ သူတို့ရဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ minifigures တွေကိုကျေးဇူးတင်ပြီးအထင်ကရကိုလက်ခံယုံကြည်ခဲ့တယ် classic cartနဂိုမူလစိတ်ကူးထားသောမျက်ခွက် Lego Ideas ပရောဂျက်သည်အနက်ရောင်၊ အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်တို့ကိုရောစပ်ရန်ရိုးရှင်းသောရောစပ်မှုအတွက်အရောင်အားလုံးကိုငြင်းပယ်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသောပုံစံအတွက် minifigures များကြားတွင်ရှားပါးစေသည်။
ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လာမယ် classic p အဖြစ်ဆောင်ပုဒ်art of Lego Ideas၂၁၃၂၂ Pirates of Barracuda ပင်လယ်အော်၌ Captain Redbeard ၏မျက်မှောက်ခေတ်ပွဲ ဦး ထွက်သည် swashbuckling သင်္ဘောသားများကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာသည်။ Lego အဖွဲ့၏အတိတ်သည်သင်္ဘောပျက်တစ်ခုတွင်သူတို့၏ဇာတ်လမ်းကိုဆက်နေသည်။
Barracuda Bay Pirates of 21322 ၏အောင်မြင်မှုသည်သေချာသည်၊ ၎င်းပုံစံသည်သက်သေပြနေဆဲဖြစ်သည် ဝယ်လိုအား လွှတ်တင်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ပြည့်သည်။ p ၌ဖြစ်နိုင်သည်art Captain, Qu ကဲ့သို့သောထင်ရှားသော minifigures များကိုအပန်းဖြေခြင်းကြောင့်artermaster Riggings နှင့်အခြားအရာများ ဒီလွမ်းဆွတ်မှုကိုပြန်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ Lego ဆောင်ပုဒ်သည်ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်လိုပေမည် Ideas တည်ဆောက်မှုသည်ယခုနှစ်တွင်အနားယူရန်ရှိသည် အဆိုအရ Brick Fanatics'' သတင်းရင်းမြစ်.
21324 123 နှမ်းလမ်း မည်သည့်တရားဝင်မော်ဒယ်၏လျှာလှည့်စားဆင်ယင်မှုအမည်များတွင်မှတစ်ခုသာမကပါ၊ ဒါပေမယ့်၎င်းသည်အနုအရင့်ဆုံး minifigure ဒြပ်စင်အသစ်များကို p အဖြစ်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။art ၏ Lego Ideas ၂၁၃၀၄ တွင် Doctor Who ၌ sonic screwdriver ကဲ့သို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ပါ။
အုတ်အသစ်ငါးလုံးစီသည်နှမ်းလမ်းမှ Elmo မှ Big Bird အထိသီးခြားနိုင်ငံသားများကိုပုံဖော်သည်။ ဤပွဲ ဦး ထွက်ပြသမှုသည် minifigures ကဲ့သို့လတ်ဆတ်သောအစိတ်အပိုင်းသစ်များမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့သောအနာဂတ်ဇာတ်ကောင်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကူညီခဲ့သည်။ ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh နှင့် လာမည့်အတွဲများတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။
← LEGO Harry Potter တိုင်းသည် ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူသည်
LEGO BrickLink Designer Program တစ်ခု၏စတော့ရှယ်ယာအမှားကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီ →